जिराभवानीकाे एक जनामा पनि काेराेना, पर्सामा संक्रमितकाे संख्या सय पुग्याे
by कालिका टाईम्स १६ जेष्ठ २०७७ १८:२६ 29 May 2020 0161
वीरगंज । पर्साकाे जिराभवानीका गाउँपालिका वडा नं. ५ हरैयाका एक जनामा काेराेना संक्रमण पुष्टि भएकाे छ । विताे महताे जनता मावि जितपुर नयाँटाेलाकाे क्वारेन्टाइनमा रहेका ३४ बर्षिय पुरुषमा काेराेना संक्रमण पुष्टि भएकाे हाे ।
७ दिन पहिला भारतकाे रक्साैलबाट आएका युवकमा संक्रमण फेला परेकाे क्वारेन्टाइनका जिम्मेवार व्यक्ति सिएमए राजकुमार चाैधरीले वताए ।
उनका अनुसार संक्रमण फेला परेका युवक ७ दिन पहिला आफ्नाे श्रीमतीसंगै भारतकाे रक्साैलबाट आएका थिए । लकडाउन भन्दा पहिला नै उनी आफ्नाे श्रीमतीसंगै रक्साैलस्थित एक वैवाहिक समाराेहमा सहभागि हुन गएका थिए । तर लकडाउनका कारण रक्साैल मै राेकिएका उनीहरु एक हप्ता पहिला मात्र जिराभवानी आएका थिए ।
रक्साैलबाट आए लगतै उनीहरुलाई गाउँपालिकाले क्वारेन्टाइनमा राखेकाे थियाे । मंगलबार उनीहरुसहित १९ जनाकाे स्वाब संकलन गरी नारायणी अस्पतालकाे प्रयाेगशालामा परिक्षणकाे लागि पठाइएकाे थियाे । साेही मध्येका एक युवककाे रिपाेर्ट पाेजेटिभ आएकाे चाैधरीले जानकारी गराए । तर उनकाे श्रीमतीसहित बाकी १८ जनाकाे रिपाेर्ट नगेटिभ आएकाे उनले वताए ।
संक्रमित व्यक्तिलाई वीरगंजस्थि नारायणी बिशेष काेराेना अस्पताल गण्डकमा पठाइसकिएकाे उनले वताए ।
संक्रमित जिराभवानी गापा ५ हरैया निवासी भए पनि उनकाे स्थाई घर धाेबिनी गाउँपालिकाकाे लक्षमीपुर रहेकाे सिएमए चाैधरीले जानकारी दिए । उनी हरैयास्थित ससुराली घरमा बस्दै आएकाे चाैधरीले वताए ।
हाल पनि त्यहीं क्वारेन्टाइनमा २ महिला सहित ३८ जना रहेकाे सिएमए चाैधरीले जानकारी दिए ।
बिहिबार सांझ पनि पाेखरिया नगरपालिकाकाे ४ जनामा काेराेना संक्रमण फेला परेकाे थियाे । तर याे ४ सहित पर्साका ५ जनामा संक्रमण फेला परेकाे स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आज मात्र पुष्टि गरेकाे हाे । याेसंगै पर्सामा संक्रमितकाे संख्या सय पुुगेकाे छ ।
SQL requests:140. Generation time:1.055 sec. Memory consumption:13.76 mb